जनप्रियका क्याम्पसका संस्थापक अध्यक्ष प्रेमनारायणको निधन | eAdarsha.com
पोखरा । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराका संस्थापक अध्यक्ष प्रेमनारायण बरालको ८८ वर्षको उमेरमा सोमबार साँझ निधन भयो ।
पोखरा–७ मासबार निवासी बराल पोखरा बहुदल पार्क (हालको सहिद पार्क) पार्दी, पुष्करेश्वर महादेव मन्दिर मासबार र बायोग्याँस विकास समूह पोखराका पनि संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
उनी श्रीकृष्ण मावि मासबार र जनप्रिय मावि सिमलचौरका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने वैकल्पिक ऊर्जा विकास प्रवद्र्धन केन्द्रका पनि केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिए/बिएल तथा उदयपुर युनिभर्सिटी राजस्थान भारतबाट समाजशास्त्रमा एमएम गरेका बराल अधिवक्ता पनि हुन् ।
बरालको सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । देवघाटमा केही वर्ष रहेर गायत्री पुनस्चरण गरेका बरालको ‘वेदान्त प्रवेशिका’ नामक कृति प्रकाशित छ ।
उनको शवयात्रा सोमबार बिहान ८ बजे मासबारस्थित निवासबाट हुने र पोखरा ९, शान्तिघाटमा अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक सूत्रले जनाएको छ ।
स्व. बरालका २ पत्नी, ३ छोरा, ३ छोरी र नातिनातिनी छन् । जेठो छोरा डा. विनोद बराल, साहिँला छोरा सरोजनारायण बराल (नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिका सचिव) र कान्छा धर्मेन्द्रनारायण बराल हुन् । माहिला प्रमोदनारायण बरालको केही वर्ष अघि निधन भएको छ ।